Imandarmedia.com.np: तपाइ ह्यान्डसम बन्न चाहनुहुन्छ ? रोक्नुहोस् यस्ता सामान्य ५ गल्ती
Lifestyle » तपाइ ह्यान्डसम बन्न चाहनुहुन्छ ? रोक्नुहोस् यस्ता सामान्य ५ गल्ती
तपाइ ह्यान्डसम बन्न चाहनुहुन्छ ? रोक्नुहोस् यस्ता सामान्य ५ गल्ती
उमेरसँगै कपाल फुल्दै जान्छ । कतिपयको उमेर नपुगेरै फुल्न सक्छ । पुरुषहरुले फुलेको कपाल बुढ्यौलीको संज्ञा ठान्छन् । त्यसैले समय मिल्यो कि फुलेका कपाल पन्छाउन खोज्छन् । यही गल्तीले उनीहरुलाई दोहोरो हानी गर्छ । एउटा फुलेको कपाल वरिपरिका कपाल प्रभावित भएर भविष्यमा तक्लु नै हुने र अर्को तनावले झन् धेरै कपाल फुल्ने हुन्छ।
पुरुष कम सौन्दर्यप्रेमी हुन्छन् १ यो गलत हो, साना कुरामा पो रुची राख्दैनन् त । जस्तो नङ सजाउनु, ओठ चिल्लो राख्नु र आँखी भौँ सम्याउनु । तर, सबभन्दा ठूलो गल्ती यहीँनेर गरिरहेका हुन्छन् कि हात र खुट्टाको नङ आधा पहेँलो नहुन्जेल काट्दैनन् । यी पनि अरुका आँखा चाँडै पर्ने ठाउँ हुन् । त्यसैले ह्यान्डसम बन्ने सपनाको बाधक यो बानी पनि हुन सक्छ। स्वास्थ्य खवर